Abesifazane abasemagqabini eRussia yizo zesini esilungileyo eziziimpawu zendlela kunye nokuphelela. La mabhinqa angakwazi ukunqoba intliziyo engaphezu kweyodwa, abashiya abaphulaphuli beentombi, kuba abafazi beli lizwe lonke bazama ukuzifanisa kunye nokuhambelana nemibono yefestile.
U-Renata Litvinova uvula uluhlu lwethu lwabesetyhini abasemgangathweni eRussia. Lo mdlali kunye nomlawuli wexesha-nxalenye unomfazi obonakala ngokumangalisayo, owokuqala kunye ongaqondakaliyo. Izambatho ze-Litvinova ezifake imfashini zidibanisa imifanekiso ye-30-50 yekhulu elidlulileyo, kunye nezandla zakhe ezimnyama phezu kwamehlo akhe, iinqanawa, i-shawls kunye neenwele ezenziwe ngumoya "umtsalane" kumenza ahloniphe ukufezeka kwalo mfazi kwaye akhuphe umfanekiso wakhe. Ngendlela, ngo-2009, umdlali we-actress wanikezela lonke elase-Russia iimpahla zakhe zokuqokelela kwehlobo lasehlobo.
Isitayela esingabonakaliyo sombonisi weTV kunye neengonyama zelizwe uKsenia Sobchak kwakhiwa kungekudala, kodwa ayizange imvimbele namhlanje ukuba ibe phakathi kwabantu abasemgangathweni nabasemgangathweni eRashiya. Le ntombazana inakho ngokukhululeka okungaqhelekanga kuzo zonke izinto ezinqwenelekayo, ngokuzenzekelayo zizama indlela yakhe. Akukho sizathu sokuba incwadi yombhali, uSobchak, enegama elinesihloko esithi "Iindlela zobugcisa zikaKsenia Sobchak," zixabiseke kakhulu kwiibondlo zabasetyhini abasetyhini.
Xa uthetha ngalo mfazi, awukwazi ukushiya ikhabethe lomculi odumile uDima Bilan (ungumlimi). Ngokusekelwe kumfanekiso weDima, ungatsho ngokukhuselekileyo ukuba umlimi wakhe uthenge zonke iimveliso zehlabathi, ngaphandle kokucinga ngazo. Kakade, uMadame Rudkovskaya ngokwakhe uhlala ekwazi ukugqoka ngokugqithiseleyo nangendlela yokuqala. Ngokukodwa abalandeli bebhola lobomi bebhula uRudkovskaya, kunye nomklami wefashini u-Ilya Shiyan, wakhulula ukuqokelela kweengubo ezihambelana ngokupheleleyo nomoya walo mfazi.
Kwixesha elidlulileyo, i-gymnast eyaziwayo, kwaye ngoku i-politician onoxanduva kunye nePhini likaSvetlana Khorkina nguye oyintloko kwiindwendwe. Lo wesifazane uhlala ekwazi ukutsala ingqalelo. Kwaye kunye nokuzama kwakhe okumangalisayo ngeenwele kunye nombala weenwele akumthinteli ukuba ahlale ehlala kwinqanaba lakhe. Ngomzuzu uSvetlana unika ukhetho kumntu omnyama kunye omhlophe kunye nolondolozo.
Iifashini zigqoka uMas Malinovskaya ukuba zihluke kwiindwendwe zasekhaya kwaye ziphakathi kwabantu abanomdla ongenakulinganiswa. Le ntombazana ayifani ngokulinganayo, uhlala ehlaziyekile kwaye enhle kwindlela yakhe yentando yesininzi.
Ukungathethi ngalo mculi, kuthetha ukuthetha nto nhlobo. Akayena nje umfazi othembisayo kwaye onokhenkcoti, utsho iifashthi. Izambatho zakhe eziphathekayo azizange zibonwe, kwaye uJeanne ngokwakhe uye wahlala eluhlu lwabasetyhini abanentlonelo kunye nabasetyhini belizwe lethu.
Umboniso ovelele kakhulu kumabonwakude eRussia, kwaye ngoku kutshanje e-Ukraine ("Master Chef", umboniso wezithuba zeprojekthi "I-Bachelor 1, 2") inelungelo lokuhlonipha elinye labesetyhini abasenyakatho kweli lizwe. Yaye yinyani, yintoni kuphela ilizwi lakhe lezesondo kunye neendlela zokuziphatha, ezinokulimaza nawuphi na umntu ophilayo. U-Anfisa usoloko ekhangelelwa ngumfazi kwaye akafihleli iifom zakhe ezimangalisayo, kodwa ngokuchaseneyo, ugxininisa kakuhle, obanika "ukukhanya okuluhlaza" kubo bonke abafazi abakhulileyo.
Kwangexesha elide, lo mfazi wezopolitiko wayekhangela uphando olusisiseko. Wayenombola intloko ngokukhawuleza ehamba okanye echeba iflyflyfly emqaleni kwentamo yakhe. Ngoku u-Irina, sele eyekile ukuzama ukujonga ukubonakala kwakhe, uthathwa njengowesifazane oyintanda kakhulu phakathi kwezombusazwe zaseRashiya. Umfanekiselo wakhe ungumlamoni, ubufazi kunye nenhle. Umzekelo wale nto yayikuqokelelwe kweengubo ezasandul 'ukuza kunye kunye nomyili wezakhiwo uMela Makashova, apho uHakamada waba ngumyili. Ezi ntlobo zihlangene phantsi kwegama elilodwa elithi "HakaMa".
Uluhlu lugqitywa ngabafazi abanjengomculi uLima Vaikule, abadlali be-Ekaterina Guseva kunye no-Anastasia Zavorotnyuk. Laba babameli besini esifanelekileyo isalathisi sendlela ohlala uhlala ngayo kwinani lokuthandwa, isitayela kwaye ube ngumzekelo wokulingisa.
Biography ka-Alexander Loie
UJack Gyllenhaal noReese Witherspoon
I-Soloist yeqela VIA Gra Albina Dzhanabaeva
UTatyana Bulanova: Ndiyilungise iresiphi yesimo esihle
Amadoda ebomini uJuliette Binoche
Tatiana Dogileva, ubomi bobucala
Indlela yokulungiselela kunye noko kufuneka ukwazi malunga nokubeletha
Ukuxilisa i-urethral kwi-candle yamadoda
Musaka kunye nesitshalo seqanda
Ukupheka okumnandi nokulula
I-Apple inika i-caramel
Isidlo esivela kwi-cocktail yase-sea
I-StenGazet yoNyaka omtsha 2016: njani ukwenza iPoster yonyaka omtsha ngezandla zabo
Ukwakhiwa kwamagumbi okulala: Isitayela saseTaliyane